आजको– पञ्चाङ्ग वि.सं. २०७६ असार २९,आइतबार,इ.स. २०१९ जुलाई १४,शकसंवत् १९४१,परिधावी संवत्सर। उत्तरायण,ग्रीष्म ऋतु,ने.सं. ११३९ दिल्लाथ्व,आषाढ शुक्लपक्ष,त्रयोदशी, २५:१२ उप्रान्त चतुर्दशी, नक्षत्र– ज्येष्ठा, १८:४५ बजेउप्रान्त मूल,योग– शुक्ल, ६:२३ बजेदेखि ब्रह्म, २९:१५ बजेउप्रान्त ऐन्द्र, करण– कौलव, १३:१७ बजेदेखि तैतिल, २५:१२ बजेउप्रान्त गर, आनन्दादिमा काण योग, चन्द्रराशि– वृश्चिक, १८:४५ बजेउप्रान्त धनु, सूर्योदय– ५:१८ बजे, सूर्यास्त– १९:०० बजे र दिनमान ३४ घडी ४ पला। आदिकवि भानुभक्त जयन्ती। प्रदोष व्रत।
आश्वासन बाढ्ने तथा काम गर्दिन्छु भनेर रुपैया पैसा माग्नेहरुदेखि सजक रहनुहोला फसाउँन सक्छन् । काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला काम बिग्रने हुँदा लामो समय सम्म त्यसको प्रभाव देखिनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला नराम्रा घट्नाहरु घट्न सक्छ । घर परिवार तथा आफन्त सँग घरायसि कुरामा राय बाजिनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले धार्मिम प्रतिष्ठान तथा मन्दिरको यात्रा हुनेछ ।
खर्च बढ्ने तथा उपलब्धि हात नलाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । आमा तथा आफन्तबाट टाडिएरु लामो यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । प्रेममा रमाउने चाहनेहरुका लागि समय उत्तम नहुन सक्छ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट भने आम्दानि गर्न सकिनेछ । घर जग्गा तथा सवारि साधनको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला । साझपख समय राम्रो रहेकोले पढाई लेखाईमा भनेजस्तो प्रगति गर्न सकिनेछ ।
छोटो दुरिको व्यावसायिक यात्राको तय हुनेछ भने यात्राका क्रममा साथिभाई सँग रमाईलो गर्दै दिनलाई रंगिन बनाउँन सकिनेछ । आफन्त तथा निकट सम्बन्ध भएका मानिससँग छुट्टिनुपर्दा मन खिन्न रहनेछ । आफु भन्दा ठुला मानिसको सुझाब तथा सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सके गन्तब्यमा पुग्न सहज हुनेछ । साझपख आमासँग टाडिएरु यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ ।
लामो दुरिको बैदेशिक यात्राको तय हुनेछ । बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यावसायबाट प्रसस्त आम्दानि हुनेछ भने स्वदेशि उत्पादनमा नाफा कमाउँन अलि बढि समय खर्चनु पर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउनेछ भने शरिरमा आलस्यता तथा अल्छिपना बढेर जानेछ । साभपख समय राम्रो रहेकोले राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ ।
आएस्रोतका बाटाहरु फराकिला हुँने तथा रोजगारिका अवसरहरु सिर्जना गरि रोजगार दिन सकिनेछ । भौतिक तथा मानव निर्मित भोगबिलासका सामानहरु प्राप्त हुनेछन् । दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्ध सुदृड हुनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा समय लगानि गर्दा गुरुवर्ग तथा परिवारजनको सहयोग पाईने सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले स्वास्थ्यमा समस्या आईन सक्छ ।
समाजमा लोकप्रिर्य काम गरि दाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ भने राज्यको तर्फबाट सम्मानित हुँने योग रहेकोछ । राजनिति तथा समाजसेवामा अरुको मन जित्दै तथा अरुलाई प्रतिष्पर्धामा हराउँदै पद पाउँने प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । धर्म कर्ममा मन जानेछ भने धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावासायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।